malunga Webtalk - Isingeniso seVidiyo - 💌 WebTK - Ithikithi yakho ukuya WebTalK 🚀 Mema, Hlola, Iindaba kunye nokunye 🔥
malunga Webtalk - Isingeniso seVidiyo
Septemba 14, 2019 Matshi 8, 2019 by Webtk.co
Ukugcina ubomi bakho bobuqu, ubugcisa kunye nezoshishino kwi-intanethi uye waba ngumsebenzi onzima.
Uninzi olukhethileyo luye lwadala ukudideka okukhulu kungekho nto ibonakala ikunika ulawulo lwenxibelelwano lwakho olufunayo.
Webtalk Yona yokuqala inxibelelwano yonxibelelwano, inxibelelwano kunye nentengiso yentlalo eyenzelwe ukukunceda uqhagamshelane kakuhle kwaye ulondoloze ixesha.
kunye Webtalk, uqinisa ubudlelwane kunye noqhagamshelwano oluthe ngqo kunye nolubonakalayo, ukwakha ukuthembeka kwakho kwaye uqhube ibhizinisi lakho ngokufanelekileyo ngokwentambo ephakamileyo yefu eququzelele ngokucwangcisekileyo ubomi bakho bobuqu, ubugcisa kunye nezoshishino zibe lula ukulawula iindidi.
Webtalk Ukubeka ekulawuleni ngubani obona oko kwaye nini. Ubunzima bentlalo yokongeza oogxa, abahlobo kunye nosapho kwintanethi efanayo kwi-intanethi ngoku sele iphelile.
Ukulawula ukuthetha kwakho ngcono kuqala ngokulawula oonxibelelwano bakho ngcono.
WebtalkInkqubo yoxhumano lomncedisi wephepha-patent inokunceda ukuba ubhalise uxhulumaniso lwakho olusekelwe kubuhlobo bobuhlobo bokwenene.
Xa kwakhiwa uqhagamshelwano olutsha Webtalk, unako ukubhala ukudibanisa kwezobuchwepheshe njengomntu onokuthintana naye ngokuthengisa, umsebenzi, ishishini kunye netyala lokusebenzisa imali Webtalkiimpawu zokubhaliweyo zeqela kunye neqela leqela lokubhaliweyo, uze ungeze amagama angundoqo kunye nenkcazelo yokunceda loo mntu kamva kwirejista yolawulo lwenxibelelwano.
Ngomnxibelelwano olusesikweni, oluntu kunye noluntu, Webtalk Unceda ulawule ubomi bakho kwi-intanethi njengoko ubuya kubomi bakho boqobo.
Ukwakha nokugcina ukuthembeka kubaluleke kakhulu kuzo zonke iinkalo zobomi bakho.
Kunjalo ngoba Webtalk ikuvumela ukuba ubonise italente yakho ngokuqhubeka kwakhona kunye negalari yemidiya ukuze ubonise iphothifoliyo yakho yobugcisa, amadigri, izatifikethi, iifoto kunye namavidiyo.
Amashishini angabonisa kwakhona iimveliso, iinkonzo, ukulinganisa kunye nokuphononongwa kwiphepha le shishini lakho ukukunceda ukwakha ithemba kunye nokutsala abathengi abatsha.
Kungekudala, Webtalk Uya kunika indawo yokukhangela imarike ukuze kuncede bonke abasebenzisi bafumane iimveliso ezinikezwa ngamanye amalungu kwaye baqhube ngakumbi kwiindawo zoshishini.
Webtalk ufuna ukunceda wonke umntu adibanise amathuba amaninzi aze aphumelele ngakumbi.
Kunjalo ngoba Webtalk ihlawulela kwi-50 yepesenti yayo yonke imali ngenkqubo yokudlulisa imali ebizwa ngokuba yiyo Social CPX.
WebtalkI-intanethi yezona ntengiso ezinkulu kwi-intanethi kunye ne-e-commerce zikhupha iibhiliyoni zeedola ngonyaka kwiintengiso, ukuhlaziywa kweprayimari kunye nemirhumo yokuthengiselana.
I-Facebook kunye ne-LinkedIn ngokuqhelekileyo kuvelisa i-$ 3 ngenyanga ukusuka kuwo wonke umsebenzisi. I-Amazon ivelisa nge $ 70 ngomsebenzisi ngenyanga ukusuka ekuthengiseni kwemveliso.
Njengoluntu wokuqala wentengiso ye-e-social, Webtalk iiprojekthi ezifikelela kumyinge we-$ 10 okanye ngaphezulu ngenyanga ukusuka kuwo wonke umsebenzisi.
Webtalk ivelisa inzuzo evela kwiintengiso zentengiso, ukuphuculwa komgangatho we-premium, izisombululo zeetalente kunye nemirhumo yokuthengana njengabanye kodwa umahluko: siyabelana nawe.
Xa ubhalisa kwi kwinkqubo yokubambisana uya kufumana ikhomishini ye-10% kuyo yonke imali eveliswe ngabasebenzisi kunye namashishini owabhekise kuyo Webtalk ubomi.
Ixesha lakho elide lokufumana umvuzo ngamnye ngokubhekiselelwa kumsebenzisi liqikelelwa kwi-$ 1 ngenyanga.
Sonke siyazi ukuba i-1 ye-$ ayiyikuguqula ubomi Webtalk wagqiba ekubeni enze okungaqondakaliyo kwaye anike umvuzo umntu wonkcenkcesha ngokuqala ukuphendulwa kwamakhenkethi okuthunyelwa.
kunye Webtalk ufumana iitaliti ngokudluliselwa kwakho ngokuthe ngqo kodwa kunye nokuthunyelwa kwabo kunye nokudluliselwa kwabo kwaye ngokunjalo kwi-degrees yokuhlukanisa.
Masithi ikhomishoni yenyanga nganye ngokudluliselwa kwayo ifinyelele kwi-$ 1 kwaye wena nabo bonke abathumelayo baye babhekisela abasebenzisi abalishumi ngalinye kwaye liyaqhubeka ngama-degrees amahlanu okanye amanqanaba okuhlukana.
Ungayifumana i-$ 10 ngenyanga ukusuka kwinqanaba lakho lokuqala, i-$ 100 ukusuka kwesibili, i-$ 1000 ukusuka kwi-third, $ 10,000 yakho kwi-4 yakho kunye ne-100,000 ngenyanga ngenyanga ukusuka kwinqanaba lakho lesihlanu.
kunye Webtalk's kwinkqubo yokubambisana elula 'ndilandele Webtalk"Iposi kwi-Facebook okanye kwi-Twitter inokuba yintshintsho yokuphila.
Inxalenye ebhetele malunga nenkqubo yokubambisana akudingeki ukuba utshintshe nayiphi na inkqubo yakho yemihla ngemihla.
Yonke intanethi yentlalo ikunika iprofayili okanye ikhonkco lekhasi ukuba uhlanganyele kunye nokwakha inethwekhi yakho.
Webtalk yenza okufanayo.
Xa ikhonkco lakho leprofayili liqhuba abasebenzisi abatsha Webtalk Uhlelo lwenkqubo yokubambisana nolungelo lobunikazi lunikeza inkokhelo yokudluliselwa.
Ngenisa i-imeyile yakho okanye iincwadi zeedilesi zeefowuni ukumema oonxibelelwano ukuba baxhumane nawe Webtalk kwaye uza kufumana iitaliti kuwo wonke umntu ojoyina.
Yabelana ngezithombe zakho, iividiyo kunye neefayili kunye nabangewona malungu kwaye ufumana iitaliti ngokudluliselwa xa ubhalisela ukubheka.
Ukuba unayo iwebhusayithi okanye iblogi, Webtalk Unika amaqhosha ezentlalo kunye neentengiso zebhanki ukuba zibonise kwiindwendwe zakho zeendawo kwaye ukuba ezi zixhobo ziqhuba abasebenzisi abatsha owanikezelwa ngetyala ngalabo bathunyelwayo.
Social CPX is WebtalkInkqubo yokuthunyelwa kwendlela ehamba phambili ekunikezela ngedeshibhodi yeselula ehamba phambili elandelela zonke iinkcukacha zakho zokudluliselwa ezinikezelwa kuyo nayiphi na imisebenzi yakho yentlalontle.
Unokujonga indlela ezininzi ezithumele ngayo, bangaphi abantu abadibeneyo Webtalk Ndiyabulela kuwe, inani lemali engenayo eyenzile kunye nee-commissions zakho.
Webtalk enye inkqubo yokuhanjiswa kwintsebenziswano ikhululekile kwaye iya kuhlala ikhona.
Abantu kunye namashishini Ujoyine Webtalk ekuqaleni kwaye uncede ukukhula kuluntu luya kuba nethuba elikhulu lokufumana imali.
Namhlanje kukho abasebenzisi be-network ye-2 ye-intanethi emhlabeni jikelele kunye nenani elixelwe ukuba liphindwe kabini kwiminyaka emihlanu ezayo.
Abantu abangabamemelayo Webtalk ngoku kungcono amathuba akho ukuba uphumelele ubomi.
Akukho nto uza kuphulukana nayo kodwa kuza kukunceda.
Joyina ngoku kwaye mema wonke umntu owaziyo ngaphambi kokuba ameme.
Webtalk: indlela efanelekileyo yokuthetha kunye nokwenza impumelelo.
Igqityelwe ukuvuselelwa kwi Septemba 14, 2019
iindidi malunga Webtalk tags Ukuthengiswa kwamanyathelo, Real Brazilian, Digital urhwebo, LinkedIn, Marketing, Microsoft, Iinkqubo zokusebenza, yokugaya, Ukuthengiswa kokubhengezwa, Imidiya yokuncokola, Iinkonzo zoluntu zokunxibelelana, UMzantsi weMakethe, iSan Francisco, Twitter, IWindows Windows Platform zokusebenza, KwiDola yaseMelika, Iwebhu yelizwe jikelele 1 Comment Post yokukhangela
Webtalk Uhlaziyo lweendaba nguRJ Garbowicz - 2019-01-31
Webtalk: isingeniso kwividiyo (isiNgesi)
ikhaya - malunga Webtalk - malunga Webtalk - Isingeniso seVidiyo